Apple waxay ka fikiraysaa inay rogto iPad Pro oo ka dhigto mid siman | Wararka IPhone
Toni Cortés | 24/09/2021 22:00 | iPad Pro, dhowr
Guriga waxaan nahay afar xubnood oo qoyska ah mid walbana wuxuu leeyahay iPad -kiisa gaarka ah. Runtuna waxay tahay in la fiirsado xoogaa sida aan u isticmaalno, 95% waqtiga aan ku qabanno qaab jiif ah. Waxaan u samaynaa si qumman oo keliya marka arjigu u baahan yahay, waxayna u muuqataa wax dhib badan.
Apple waxay ogaatay in maanta annaga dadka isticmaala aysan u isticmaalin iPad -ka sidii markii hore loo qorsheeyay. Waxayna u muuqataa inay ugu dambayntii u jeesan doonaan. Cupertino gudaheeda waxay ka fikirayaan wax soo saarka soo socda iPad Pro qaab muuqaal ah. Waxaana qabaa inay tahay fikrad wanaagsan.
War cusub ayaa hadda soo baxay Twitter, oo ogow in iPad Pro ee soo socda lagu soo saari doono qaab muuqaal ah. Taasi micnaheedu waa qaabeynta kaameeraha gadaal iyo kan hore iyo astaanta tufaaxa gadaal waxay u wareegi doontaa 90 digrii si ay u siiso iPad Pro qaab -dhismeed toosan, oo ka leexinaya midka ay waligeed lahayd. vertical, sida haddii ay ahayd iPhone weyn.
Hal tilmaam oo ah in Apple uu "wareejin doono" dhammaan iPad -yada mustaqbalka ee 90 darajo ayaa hadda ah Astaanta Apple ee shaashadda madow marka aad dib u bilowdo ipad -ka durba waxay u muuqataa mid siman. Tilmaan kale ayaa ah in tufaaxa lagu daabacay dhabarka Keyboard -ka Sixirka sidoo kale waa mid siman. Taasi "kuma dheggan tahay" astaanta toosan ee iPad -ka hadda jira.
Aad bay u caddahay in tan iyo markii la isku daray M1 processor IPad -ka cusub, shirkaddu waxay sii kordhineysaa inay rabto iPad -ka inuu u shaqeeyo sida laptop -ka, taasna waxay qasab ku tahay inay si joogto ah ugu adeegsato muuqaalka.
Dhab ahaantii, hadda farqiga kaliya ee kala saara a iPad Pro M1 oo leh Keyboard Magic ah MacBook Air M1 waa shaashadda taabashada ee ugu horreysa, iyo nidaamka qalliinka. IPad -ka cusub ee Pro M1 wuxuu socon karaa isagoon khalkhal gelin macOS Big Sur oo ku habboon shaashadda taabashada, laakiin Apple ma doonayn inay sidaas samayso, waana inay ku sii socotaa iPadOS 15. Si kastaba ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay ka fikiraysaa inay rogto iPad Pro oo ka dhigto mid siman
Barnaamijyada qaarkood waxay bilaabaan inay siiyaan aaladaha XL ee iPadOS 15